Apple wuxuu faahfaahin ka bixiyaa wararka ku saabsan amniga iPadOS iyo macruufka 14.7 | Wararka IPhone
Apple wuxuu faahfaahin ka bixiyaa astaamaha cusub ee amniga ee iPadOS iyo iOS 14.7
Angel Gonzalez | | macruufka 14, Noticias
Dhowr maalmood ka hor Apple ayaa sii daayay ka dib shan nooc oo beta ah iPadOS iyo iOS 14.7 oo loogu talagalay qalabka la jaan qaada. Betas la sii daayay toddobaadyadii la soo dhaafay ma aysan soo bandhigin cusbooneysiin weyn. Dhab ahaan, sheekoyin cusub Waxaa lagu qaabeeyey arjiga Cimilada iyadoo la dhexgelinayo tayada hawada waddamo kale iyo suurtagalnimada in la kordhiyo tirada saacadaha ku qoran HomePod ee barnaamijka Guriga. Si kastaba ha noqotee, iPadOS iyo macruufka 14.7 waxaa ku jira tiro badan oo ka mid ah dayactirka u nuglaanta amniga ee nidaamka hawlgalka oo dhan. Intaa waxaa dheer, Apple waxay dooneysay inay horumariso mid kasta oo nugeylka ah boggeeda rasmiga ah.
Cusboonaysiin amni oo xoog leh ayaa lagu daray iPadOS iyo iOS 14.7
Shaqada horumariyayaashu sidoo kale waxay dhacdaa waqtiyo aysan jirin betas lagu tijaabiyo nidaam kasta oo qalliin. Horumariyayaashu way awoodaan inay u soo sheegaan dhibaatooyinka amniga Apple ama godadka ku jira nidaamyadooda hawlgalka. Xaqiiqdii, qaar badan oo ka mid ah godadkaas la soo sheegay ayaa si xun loo adeegsan karaa si loo xado macluumaadka isticmaalaha ama lagu gaaro xakamaynta buuxda ee qalabka iyada oo aan oggolaansho buuxda laga helin isticmaalaha.
Dhibaatooyinka batteriga ma lagu xallin doonaa nooca cusub ee macruufka 14.7?
Dhammaan cusbooneysiinta ayaa wax ka qabta khalkhalgelinta amniga ee noocan ah. Xaqiiqdii, oo leh sii deyn kasta Apple waxay ku dhawaaqeysaa dhammaan faa'iidooyinka ay xallisay boggeeda rasmiga ah, iyadoo siineysa dhibco horumariyaasha ama isticmaalayaasha soo sheegay khatarta la sheegay. Markan leh iPadOS iyo macruufka 14.7 balastarrada waxaa lagu daraa meelaha soo socda ee nidaamka qalliinka:
Waxyaabaha loo yaqaan 'CoreGraphics'
Ka shaqeynta sawirka
Si loo qiyaaso
Tusaalaha I / O
Qayb kasta oo ka mid ah, Apple wuxuu sharxayaa daloolka amniga oo ay weheliyaan aaladaha ay saameynayaan, sharaxaadda u nuglaanta, iyo ugu dambeyn nambarka aan sharciga ahayn ee ay bixiso Apple iyo dhibcaha kuwa soo saaray cayayaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple wuxuu faahfaahin ka bixiyaa astaamaha cusub ee amniga ee iPadOS iyo iOS 14.7
Tetris Beat: Tetris-ka caadiga ah oo leh muusig gaar ah oo keliya oo laga heli karo Apple Arcade